Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka My Name Is Khan Ee Ay Ku Midooweyn Lamaanaha SRK Iyo Kajol – Filimside.net
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka My Name Is Khan Ee Ay Ku Midooweyn Lamaanaha SRK Iyo Kajol
Waxaa maanta oo kale 12 Febraayo sanadkii 2010 la daawaday filmka weyn ee My Name Is Khan kaaso ay hogaamiyaal ka ahaayen lamaanaha lawada jecel yahay Shah Rukh Khan Iyo Kajol.
My Name Is Khan waa film weyn maqaam sarena ka jooga fanka hindiya waxuuna noqday film Big Hit ah aadna loo wada jecelyahay ilaa maantadan.
Fadlan Halkaan Hoose Kaga Bogo Xaqiiqooyin U Gaar Ah My Name Is Khan:
Xaqiiqada 1aad: Shah Rukh Khan doorkisa uu filmkaan ku jilaayey in badan ayuu u dadaalay xitaa guriga marka uu joogo ayuu tijaabooyin badan iska qaadi jiray si uu doorkas oga soo baxo.
Xaqiiqada 2aad: Shah Rukh khan waxuu filmkaan ku hantay inuu ku qaato abaal marinta atooraha ugu wanaagsan ee ay shirkada Filmfare Award bixiso waliba waxuu bar bareeyay iskoorki Dilip Kumar u yiilay maadama Dilip tiro 8 jeer ah uu abaal marintaan ku guulestay waxana soo bar bar dhigay SRK markaan.
Xaqiiqada 3aad: Filmsameye Karan Johar markii labaad ayuu ku guulestay abaal marinta Director-ka ugu wanaagsan Bollywoodka oo ay Filmfare bixiso waxuuna marki kowaad ku qaatay filmkii Kuch kuch Hota Hai.
Xaqiiqada 4aad: SRK filmkiisa My Name Is khan waxuu noqday sanadkii 2010 filmka lacaga ugu badan ka keena daafaha caalamka isagoo waliba All Time Blockbuster ka noqday daafaha caalamka madaama $20m kasoo xareeyay.
Xaqiiqada 5aad: SRK doorkisa uu filmka ku jilaayey si uu boqolkiiba boqol oga soo baxo waxuu waqtigiisa ugu badan siiyay filmkaan waxuu akhrisan jiray buugag badan isagoo daawan jiray muuqalo kala duwan si uu doorkisa in badan u fahmo maadama waji cusub uu filmkaan ku jilaayey kaaso uusan abid horey usameynin.
Xaqiiqada 6aad: Kareena Kapoor Khan ayaa markii hore filmkaan atirisho ka noqon lahed balse Karan ayaa si lama filaan ah ula saxiixda doorka atirishinimo saaxiibtisa Kajol.
Xaqiiqada 7aad: Filmkaan waxaa 10 Febraayo laga daawaday Dubai iyo qaar kamid ah wadamad carabta balse 12 Febraayo ayaa gudaha India laga daawaday.
Xaqiiqada 8aad: Kajol aya markii 5aad ku hanatay filmkaan abaal marinta atirishada ugu wanaagsan ee ay filmfare bixiso waliba waxay soo bar bareysay iskoorkii habar yarted Nutan u yiilay kaaso ah tiro 5 jeer oo ay horey Nutan ugu guulesatay abaal marintaan waxayna ahed atiirshada ugu badan ee biladan hanato hase ahaate hader Kajol ayaa booskas soo gashay maadama iyadana tiro 5 jeer ah ay hanatay.
Xaqiiqada 9aad: waa markii labaad oo ay SRK, Kajol iyo Karan Johar hal mar kuwada guulestan abaal marinta filmfare Awards qeybaha kala ah atooraha ugu wanaagsan, atirishada ugu wanaagsan iyo Director-ka ugu wanaagsan waxayna hada kahor sidan oo kale dhacday sanadkii 1999 kadib markii ay abaal marinadan kuwada qaaten filmkii Kuch Kuch Hota Hai.
Xaqiiqada 10-aad: SRK waxaa loo diiday inuu gudaha Mareekanka galo 14 Aug 2009 xili uu rabay filimkan My Name Is Khan inuu la wadaago fariintiisa bulshada Koonfur Asia kasoo jeedo ee New York dagan balse Airport-ka ayaa saacado lagu heestay madaama magaciisa Khan u dambeeyo Muslim-na uu yahay. Balse markii dambe waa loo ogolaaday inuu gudaha USA galo asigoo SRK sheegay in filimkiisa My Name Is Khan fariinta uu xambaarsan yahay ay tahay in qof walbo oo Muslim ah argagaxiso ahayn sidoo kalena diinta Islaamka nabad xambaarsan tahay.
Xaqiiqada 11-aad: May Name Is Khan waa filimka ugu horeeyay ee Karan Johar sameeyay ee aan xarafka “K” ka bilaabaneyn sidoo kalena waa filimka ugu horeeyay ee Karan Johar sameeyay oo aan Rani Mukerji wax muuqaal ah ku laheyn madaama dhamaan filimadiisii hore Rani door yar ama mid weyn ku lahaan jirtay.
Xaqiiqada 12-aad: Varun Dhawan iyo Sidharth Malhotra ayaa filimkan Director caawiye ka ahaayeen ayagoo Karan Johar la shaqeeyeen waxaana u xigtay labo sano kadib ama sanadii 2012 inuu Karan Johar labadan wiil iyo Alia Bhatt kusoo caan bixiyay filimkii Student of The Year.
Fadlan hoos ka daawo heesaha filimka My Name Is Khan oo ka mid ah aflaanta ugu sheekada wanaagsan ebid Hindiya sameeyaan:
Noor E Khuda:
Allaha Hi Rahem: